अनौठो विश्व परिवेश | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
अनौठो विश्व परिवेश
राजनैतिक अध्यात्मिक, यौगिक विषय भन्दा पनि विश्वमा रहेका विविध प्रचलन, रितिरिवाज, चराचरको प्राकृतिक स्वभाव लगायत राष्ट्रिय
अन्तरराष्ट्रिय जगतका तथ्यपरक विष्यवस्तु आम मानव विज्ञासाको विषय हुने अनुभवमा आएकोले निरस भन्दा पनि रोचक विश्व परिवेशको सामान्य जानकारी शेयर गर्ने प्रयास गर्दैछु ।
लैंगिक समानता भन्दा भन्दै पुरुष भन्दा नारीलाई कितावमा बढी स्वतन्त्रता प्रदान भएको स्थितिमा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? छोरा जन्म्यो भने न्वारनका दिन दुबो हाली बाबुलाई मान गर्ने यथेष्ट प्रचलन नेपालमा जीवन्त छ । घृष्णा लागेर आउँछ, ब्रतबन्धमा अनेक तोत्र होमका साथै जोगी रुप धारण गरी भीक्षा माग्ने गरिन्छ । पवित्र उद्देश्यबाट उत्पत्ति भएका क्रिया यसरी कर्मकाण्डी हुँदा चित्त बुझेन । वैवाहिक सम्बन्धका लागि हाडनाताको बन्देज कानूनमा छ तर मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ७० को उपदफा २ मा आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन । यो व्यवस्थाले के भन्न र जनाउन खोजेको सम्बन्धमा उल्लेख गर्न आवश्यक छ । किन त्यस्तो आवश्यकता पर्यो ? मुश्लिम समुदायमा काकाको छोरी विवाह हुन्छ, जनजातिहरुमा फुपु मामाका सन्तान बीच त्यस्तै गरी ठकुरी क्षत्रीयहरुमा पनि विविध प्रचलन छन्, त्यसमा बाधा व्यवधान नपरोस भनि गरिए होलान । विश्वमा के कस्ता चलन रहेछन्, भनि अध्ययन गर्दा विवाह सम्बन्धि निम्न रिवाज बुझ्न खोजे भारतको छत्तीसगढ राज्यमा धु्रबा जनजातिमा भाई बहिनी बीच विवाह हुन्छ । बंगलादेशमा केही जातिमा बावु छोरी बीच विवाह गरिन्छ । नाईजेरियामा पनि बाबु छोरी विवाह गर्ने प्रचलन छ । ग्रीक यूनानी पौराणिक गाथामा अन्धविश्वास कारण परि ओईडिपस (इभमष्उगक) भन्ने राजाले आफ्नै आमासँग विवाह गर्दा दुःखद अन्त भयो । फ्रान्समा मृत व्यक्तिसँग विवाह गर्ने कारण राज्यले सम्पत्ति नलेओस भनि प्रचलन छ । लेवनान देशमा ३० सन्तान जन्माउन अनिवार्य छ । त्यहाँ विवाह गर्दा नौकरी मिल्छ, पपुआ न्यूगिनीमा महिलालाई यौन गर्ने छूट छ उनले रोजेको मानिससँग यौन क्रिडा गर्न पाउँछ, त्यस्तोमा कुनै मानिसले शारिरीक सम्पर्क गर्ने इन्कार गरे मुखमा पिसाव गर्ने अधिकार महिलालाई छ । अमेरिकाको भिनीसोरा राज्यमा माछासँग यौन गर्ने चलन सुनियो, भारतको हिमाञ्चल प्रदेश किन्नौर जिल्लामा बहुपति प्रथा छ । कुनै पनि महिलासँग कोठा भित्र बसे बाहिर टोपी राख्छ अरुले हस्तक्षेप गर्दैन । नेपालका हिमाली क्षेत्रहरुमा पनि यो प्रथा छ पाण्डव विवाहको नमूना हो ।
इजिष्ट देशमा विरालोको पुजा हुन्छ त्यसका लागि मन्दिर पनि छन्, फिनलैण्ड देशमा दुधविक्री गर्नु अपराध मानिन्छ । क्युवाको राष्ट्रिय पशु मगर मच्छ, भुटानको कौव्वा राष्ट्रिय पंक्षि हो । शेरनीको दुध विश्वभर सर्वाधिक महंगो हुन्छ । कुकुर पहेलो रंग देखेर, सर्प निलो, बाघ लाल, हात्ती पहेलो रंगले उत्तेजित हुन्छन् । पाकिस्तानमा धेरै विराला, भारतमा धेरैले कुकुर हुन्छन्, स्पेन देशमा साढेसँग लड्ने खेल हुन्छ । मोनक्को देश टेक्स फ्री झै अरुवा देशमा धेरै टेक्स छ ।
स्पेनमा केटी नांगै भएर हिडन छुट पाउँछन् । इडौर भन्ने देशमा केटा र केटीको विवाह नांगै भएर गरिन्छ । भारतको माही जातिमा पनि यो प्रचलन छ । मुसो भोक लागे आफ्नै शरिरको मासु समेत खान थाल्छ, नेपेथिस भन्ने विरुवाले मुसो खान्छ । एउटै नदी नभएको देश साउदी अरव, यस देशमा कडा कानून छ, यसलाई मस्जीदको देश पनि भनिन्छ । यहाँ एउटा पनि मन्दिर छैन, विश्वको धनी देश कतर, एउटै महिला नभएको देश बेटीकन सिटी रुसको एउटा भागमा एकै समय रात र अर्को भागमा दिन हुन्छ । औष्ट्रिया देशमा यस्तो संस्था खुल्यो जहाँ केटा केटी यौन क्रिडा गर्छन, २७ मानिस मात्र भएको सिलैण्ड देश विश्वमा छ । जाम्बियाका मानिस कम पढे लेखेका, ब्ल्यू ह्वेल माछाका १४ हजार दात हुन्छन, मगर मच्छले फलामे किला समेत पचाउछ । टे«नको डब्बा लिएर उड्न सक्ने क्षमता शुतुर मुर्ग पंक्षीमा छ । १० वर्षसम्म केही नखाएर बाच्न सक्ने माकुरो संसारमा छ । नर्बे देशमा १२ बजे पुजा र राती खोती गर्ने प्रचलन छ । बढी सुत्ने मानिस फ्रान्सका छन्, । पाकिस्तानी कम विश्व भ्रमण गर्छन । उत्तर कोरियाली दक्षिण
कोरिया बोहक विश्वमा जादैनन् । सबभन्दा बढी सुत्ने माछो डल्फिन, सबभन्दा महंगो फल जापानमा पाइन्छ । मीनी पंजाव भनेर कनाडा संवोधित
हुन्छ । वर्फबाट विद्युत तयार गर्ने देश अमेरिका, जम्मै विटामीन पाईने फल पपीगे विश्वको सबभन्दा लामो आईमाई नेदरलैण्डमा, भारतको राजसंस्थानमा सबभन्दा कम वर्षा हुन्छ । मरेपछि पनि उभिने जनावर बाघ हो ।
दक्षिण भारतमा ब्राहमण समेत मामा छोरी विवाह गर्छन, उत्तर भारतमा मनाही छ । त्यस्तै मासु वर्जित छ दक्षिणमा भने, उत्तरमा छुट छ । संस्कृतमा श्लोक पनि छ ः दक्षिणे मातुला कन्या उत्तरे मांस भोजने– यो सम्पूर्ण जगत अनेकौ आश्चर्यजनक घटनाहरुले भरिएको छ । पुनर्जन्मका, त्यस्तै बालकमा नपत्याउने ज्ञानोदय, अनेक क्षमता तत्वदर्शी त्यस्तै अपराधिक मनोवृत्तिले ग्रस्त थरी थरीका प्राणीहरु विश्वमा छन, दक्षिण अफ्रिकी घना जंगलहरुमा रुख विरुवा जस्तै रंग फेर्न सक्ने प्राकृतिक गुण जनावरहरुमा देखिन्छ । संसारका कतिपय व्यक्तिहरु मानव भक्षण गर्ने पनि देखिए आजका समय मन्थर भए पनि पपुआ न्यूगिनी नागालैण्ड लगायतमा मानवले नरभक्षण गर्ने सुनिन्छ । युगाण्डाका शाशक दादा इदि अमीनका विषयमा नरभक्षण गर्ने गरेको व्यापक प्रचार थियो । हालै अमेरिकामा एक महिला मानव अंग फ्रिजमा राखेर खाने अभियोग थियो अनेकौ चलन विचित्रका परम्परा मान्यता विश्वभर अनगिन्ति छन, कुनै स्थानको चलन अर्को ठाउँका लागि घोर अपराध मानिन्छ । मुस्लिम महिलाहरुलाई कतिपय देशहरुमा मताधिकार नौकरी गर्ने गाडी हाक्ने, शरीरका अंग खुला राख्न सक्त मनाही थियो, अहिले पनि अनुहार नदेखाई बुर्काले मुख ढाक्ने चलन कडाईका साथ लगाईन्छ । श्रीलंकाले यसैको आडमा अपराध हिंसा हुन सक्ने भनि प्रतिवन्ध लगाई सकेको छ ।
यस सानो लेखमा विस्तृत विवरण लेख्न संभव छैन, कतिपय रोचक विषय क्रमशः वर्णित हुने नै छन्, प्रतिक्रिया अनुकुल सम्झीए निरन्तरता दिइने छ, अरु केही नभए पनि पढ्दा अरुचि हुने क्रम त नरहला ।
← प्रदेश स्तरीय मेयर कप सुरु
गरिव देशका गरिव शरणार्थी माथि अन्याय किन ? →